ဝါကွှား Pt ရန် built. 1 — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဝါကွှား Pt ရန် built. 1
ဘယ်သူကမှနာမကိုအမှီ droppers likes. သငျသညျငါအကြောင်းပြောနေတာပေါ့အဘယ်သူသိ. သငျသညျသူတို့သင်ဖြစ်နိုင်သိချင်သောလူကိုသိသောသိလိုသူများသည်လူ. ငါ "namedropper ထင်လာတဲ့အခါ,"ချက်ချင်းစိတ်ကိုမှကြွလာတကောင်လေးရှိတယ်. ငါသာသူ့ကိုအကြိမ်လက်တဆုပ်စာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်, ကျနော်တို့စကားပြောပြီးပြီဒါပေမယ့်အခါတိုင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှု၏ထက်ဝက်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း name ကိုပေါက်နှင့်အတူတက်ယူတတ်၏.
သူက "ကြီးမားတဲ့အချိန်" လူ၌ကောင်းသောအရေအတွက်သိတယ်, သူကမဆိုစကားလက်ဆုံသို့သူတို့အားအမည်များကိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဖို့စိတ်ပျက်ဖွယ်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်. ဒီနေရာတွင်ဥပမာတစ်ခုဖွင့်. ငါဆိုသည်ကား, "ဟေးလူ, ဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲ?"သူ့ပြန်ကြားချက်: "အိုး, ကမွန်းတည့်အကြောင်းကိုဖွင့်. ငါပဲရစ်မွန်းတည့်အချိန်၌မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နှင့်အတူကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်ကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်ကစားသောအခြိနျကာလ၏အကြှနျုပျကိုသတိပေးနေပါတယ်။ "နှုတ်ကပတ်တော်ကို?
ရိုးရိုးသားသား, ဒါကြောင့်ကိုယ့်သော်လည်းကျွန်တော်တို့ကို irk ကြောင်း droppers အမည်ကိုမ. ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်ဝါကွှားသူတွေကိုင်. ကျနော်တို့အရွယ်ရောက်လူတို့သညျကွားလြှငျငြီးငွေ့သူတို့၏အထက်တန်းကျောင်းဘောလုံးရက်ပတ်လုံးအကြောင်းကိုဝါကွှားရ (လှုပ်ရှားဖို့အချိန်တန်ပြီ, ခင်ဗျား). ကျနော်တို့ကိုသူတို့သွားရောက်တိုင်းထူးခြားဆန်းပြားရာအရပျနဲ့ပတျသကျတဲ့ tweet အချို့နည်းလမ်းရှာသောငါတို့အခွင့်ထူးခံမိတ်ဆွေပင်ပန်းသောသူကြီးထွား. ငါတို့အဘို့အဘယ်သူသည်အသေးစိတ်လူတို့အဘို့အများကြီးသည်းခံခြင်းသူတို့ဝယ်ယူတိုင်းစျေးကြီးကို item ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး (သူတို့အဆိုတော်တွေပါပဲမဟုတ်လျှင်, ဒါပေါ့). ကလျှို့လျှို့ဝှက်သင်သိသောသူအကြောင်းကွှားပွောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သို့မဟုတ် unashamedly အားလုံးသင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအထဲကညွှန်ပြ, ရုံကွှားပွောအေးမြမဟုတ်ပါဘူး.
ရိုးရှင်းစွာအထား, ဝါကွှားဖို့ "။ boastfully စကားပြော" ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါငါတို့တှငျအပေါငျးတို့သတစ်ချိန်ချိန်ကအပြစ်ရှိကြောင်းပြီ. အခြားသူများကပြုပါလာသောအခါသူကအမြဲမျက်စိလိပ်ပြောခြင်းငှါ - ဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆဲထဲတွင်ကိုယျ့ကိုယျကိုစိတျအပိုငျးယူကြပါ?
သငျသညျအရာတစ်ခုခုရှိတဲ့အခါကြွားဖြစ်ပျက် (သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုပြုပါ) သငျသညျလူတိုငျးကအကြောင်းသိရန်လိုအပ်သည်ထင်နိုင်အောင်အံ့သြဖွယ်. ထိုသူတို့ကအဲဒီအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါဘူးမသာ, သူတို့သည်သင့်ရှိခြင်းများအတွက်ဘယ်လောက်ကြောက်မက်ဘွယ်အသိအမှတ်မပြုရန်လိုအပ်ပါတယ် (သို့မဟုတ်လုပ်နေတယ်) က. ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်နှင့်အတူရိုးသားတယ်ဆိုရင်, ကျနော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ကောင်းရှုကောင်းစေသည်ထင်သောကွောငျ့အကြှနျုပျတို့မိတ်ဆွေများမှတစ်စက်နှင့်နှိမ့်ချကြွားနာမည်. မှားင်အဘယ်ကြောင့်ထိုအတိအကျဖွင့်.
အဆိုပါပြဿနာသင်သည်အဘယ်သို့အကြောင်းကြွားနေကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာဖြစ်စေခြင်းငှါ,. အဆိုပါပြဿနာကိုအဆုံးပန်းတိုင်ကဤမျှလောက်ကြီးစွာသောမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘုန်းအသရေဘို့အလိုငှါပြုပါတစုံတခုကိုမျှအပြစ်တရားသည်.
သမ္မာကျမ်းစာ၌ဝါကွှားဆွေးနွေးချက်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောသော. ဥပမာတစျခုထဲမှာတည်သည် 1 ကောရိန္သု 4:7, ပေါလုကမေးတယ်ရာ, "သင်မခံမယူခဲ့ပါကြောင်းအဘယ်သို့ရှိပါဘူး? တဖန်သင်တို့ခံယူပွုခဲ့လျှင်, သငျသညျမပွုခဲ့သော်လည်းသကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ဝါကြွားကြဘူး?"သူကအခြေခံအားဖြင့်တကားဟုင်, "သင်တိုအရာအားလုံးသင်တို့အားပေးတော်မူခဲ့သည်. သငျသညျသမျှလက်ဆောင်ကိုလက်ခံခဲ့ကြသောအခါအဘယျကွောငျ့သငျသညျဝါကွှားမယ်လို့?"
ကျနော်တို့လွှင့်တစ်ခုချင်းစီကိုဝါကွှားစကားလုံးငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောမှာတိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ဖြစ်ပါသည်. တိုင်းကောင်းသောအရာကိုယ်တော်မှလာ, သောကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမကများအတွက်အကြွေးယူနိုငျခွငျးကိုဆိုလို. အဠာအပေါင်းတို့၌ဘုန်းအသရေကိုဘုရားသခင်အားပိုငျဆိုငျ, ငါတို့မူကားအမြဲတစေမိမိကိုယ်ကိုမိမိအဘို့အချို့သောစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားနေ. ပညာရေးလောက၌, အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့အလုပျအတှကျအကြွေးယူပြီး plagiarism ဟုခေါ်သည်. အစစ်အမှန်လောကရှိ, ကကြွားလို့ချေါင်.
ထို့နောက်သူကအချေကကောင်းပြီ, မှန်သော? ဘယ်တော့မှမ, အစဉ်အဆက်ဝါကွှား!
ငါကအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ရဲ့စဉ်းစားကြဘူး. သငျသညျတခါတရံဝါကွှားသငျ့သ​​ညျငါထင်ကြဘူးမသာ, ငါကသင်ပြုဖန်တီးခဲ့ကြဘာထင်. ငါ့ကိုရှင်းပြပါရစေ.
သတိရ, ကြွား၏အမြစ်သင်ရှိသည်တစ်ခုခုစဉ်းစားသည်ကိုလူတိုင်းကအကြောင်းသိရန်လိုအပ်သည်နိုင်အောင်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် - သညျယရှေုအားဖြင့်ရွေးနှုတ်တော်မူခဲ့ကြရတယ်တဲ့သူကိုသူတို့သညျအကွောငျးကိုဝါကွှားဖို့တစ်ခုခုများပြုပါ. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သိလျှင်, ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အခြားသူများအားသူ၏ဘုန်းသည်ကိုကြားပြောစေမဖြစ်မနေခံစားရကြောင်းကိုယ်တော်အားဖြင့်လွရပါမည် (1 ချစ်. ကစား. 2:9). သူကကိုယျ့ကိုယျကိုမှစောင့်ရှောက်ဖို့လည်းကြီးမြတ်ရဲ့. ယေရမိက 9:23-24 ကောင်းစွာဖော်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်.
သငျသညျဘုရားသခငျကိုသိလိုလျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုဝါကွှားချင်. ဒါပေမယ့်သင်ပြုသည့်အခါ, ဒါဟာအတွက်ဖြစ်မသွားပါစေပါဘူး သင့်ရဲ့ ဉာဏ်ပညာကို, သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ ခွန်အား, သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာ. အစား, သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကြွား. စုံလင်သောဉာဏျပညာနှငျ့သငျသညျတကိုသိသောအချက်ကို၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်, All-အစွမ်းထက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ, နှင့်ကျေးဇူးတော်၏စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုအဆုံးသတ်ရေးဘယ်တော့မှ. အဲဒီအစားသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျော်ကြားမှုဆည်းပူးရန်သင်၏စကားသုံးပြီး၏, သူ့ရဲ့ချွတ်ပြသနိုင်ဖို့သူတို့ကိုအသုံးချ.
အဆိုပါဠာသညျဘုရားသခငျ၏ဘုနျးတျောအဘို့အ display ကိုအမှုနှင့်တူ၏. ကမ္ဘာမြေတန်ခိုးတော်ကိုပြဖန်တီးခဲ့. သစ်ပင်များကိုသူ့ရဲ့အလှတရား flaunt မှဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်. တိရစ္ဆာန်များသည်သူ၏တန်ခိုးအာနုဘော်အားထောက်ပြမှလက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခဲ့သည်. ပြီးတော့သင်? သငျသညျအထံတော်အပေါ်ဝါကွှားရန်တည်ဆောက်ခဲ့ကြ. ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦး name ကို drop ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပါစေ.
အာရုန်သည်ရက်သတ္တပတ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 6:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Erin • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 6:11 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီလှလှပပရေးသားခဲ့. ဤမျှလောက်သဘာဝကျပါတယ်. ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာအရှည်ကိုချစ်. သွားလာရင်းအကြီး. ပိုပြီးဖတ်ရှုဖို့မစောင့်နိုင်, ခရီးစဉ်ကို.
Justin Humphrey • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 6:32 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခရီးစဉ်. ဒါကတကယ့်အကောင်းမှတ်ဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခငျ၏တအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှကျေးဇူးတော်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအောင်မြင်မှုများတန်ဖိုးမရှိများမှာ. ရဲ့ငါတို့သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကြွားမယ့်အပတ်ကြစို့!
Kelcie Sthran • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 6:35 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခရီးစဉ်ခဲ့! အသစ် site ကိုအံ့သြဖွယ်ကြည့်ရှု!
တေးသံ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:04 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး. အစွမ်းထက်. tweet, ဝေစု, အီးမေးလ်က!
ဂျေး • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေဖို့ကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုခုများ!! ဒါကြောင့်, ဒီနှစ်ခုအတိုင်းလိုက်နာ 18 YouTube ပေါ်မှာနှစ်အရွယ်ခရစ်ယာန်များသည်, Instagram ကို&Twitter နဲ့နှစ်ရက်အကြာတစ်လနှင့်, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အ NC ထားခဲ့ပါနှင့် Los Angeles ကိုသွားကြဖို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်သူကပြောပါတယ်. သူတို့ဟာမနေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့!!!! အကြီးမားဆုံးအပိုင်း?!! သူတို့ဟာခွောဒေါ်လာနှင့်အတူ NC left, တစ်ကျောဗူးနှင့်၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်လမ်းလျှောက်စတင်!!! လမ်းတစ်လျှောက်, သူတို့စက်ဘီးပေးခဲ့, ထို့နောက်စားနပ်ရိက္ခာ, အမိုးအကာ, စီး &သူတို့ရဲ့ခရီးကိုကူညီဘဏ္ဍာရေး. ထိုသူတို့ကပင်ထိုသို့မမေးခဲ့ဘူး!!!!! ပြည်သူ့ပဲသူတို့ကိုမှတက်လာခြင်းနှင့်ပေးလိမ့်မယ်. ထိုလူအပေါင်းတို့သည်သူတို့အပေါ်မှာဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်လိုပဲ!! သူတို့က YouTube ပေါ်မှာလမ်းကိုအပေါ် vids မှတျတမျးတငျထားနှင့် Instagram ကိုပေါ်ဓါတ်ပုံ posted သူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ twitter အပေါ်ယနေ့အထိကျွန်တော်တို့ကိုတက်စောင့်ရှောက်. သူတို့ရဲ့ YouTube ကိုတစ်ပါတ်အတွက် updated ရသေးသော်လည်း, သူတို့သည်နေဆဲခရီးတစ်လျှောက်လုံးကနေအဲဒီမှာအပေါ် shared Marvell သက်သေခံတော်မူချက်ရှိသည်နှင့်သူတို့နီးပါးနေ့စဉ်သူတို့ရဲ့ twitter နဲ့ Instagram ကို update. ရုံသငျသညျယုံကွညျခွငျးဤကွီးစှာသောသတင်းပျံ့နှံ့နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်သင်နှင့်အတူဤပြန့်နှံ့ဖို့လိုခငျြ. ဒီတစ်ခါလည်းသင်ပင်သူတို့နှင့်အတူအဆက်အသွယ်ရနှင့်စိတ်ဓါတ်အစမ်းကြည့်ပါနိုင်ပါတယ်. ဘုရားသခငျ၏ဤသူတို့သညျ legit များမှာ. အံ့သြစရာသက်သေခံချက်. သတငျးကောငျးပျံ့နှံ့ပေးနိုင်ပါတယ်!
သူတို့ရဲ့ YouTube ကို: YouTube.com/Livin4Christ4Lyfe
သူတို့ရဲ့ Instagram ကို: Livin4Christ4Lyfe
ဘင် Sudderth III ကို • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့၏ဘလော့ဂ်ဖတ်နေခံစား. နားလည်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်လွယ်ကူဒါဟာခဲ့. ထိန်းသိမ်းမှုသည်သင်၏အကျင့်ကိုကျင့်သောအရာကိုလုပ်နေတာ!
ဘင် Sudderth III ကို
ဒါဝိဒ်သည် Gain • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟုတ်ကဲ့ညျဘုရားသခငျ၏သားကဲ့သို့ကျွန်တော်သူ့ကြောက်မက်ဘွယ်တန်ခိုးတော်အကြောင်းဝါကွှားမှတည်ဆောက်လျက်ရှိ, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, သနားခြင်းကရုဏာနှင့်အထူးသဖြင့်သူ၏ကျေးဇူးတရား. ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, တစုံတယောက်သောသူသည်ကိုယ်တော်ကိုသခင်ဘုရား၌ဝါကြွားတတ်ပါစေဝါကြွားလိုလျှင်. အဆိုပါစကားလုံး Swag သင်နှင့် ပတ်သက်. ကအားလုံးကိုလုပ်သည့်အခါဝါကြွားခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဖို့မောကျမာအရာဖြစ်သောကြွားဖို့လည်းဆိုလိုတယ်. အခါ swag မှကြွလာ, ကမ္ဘာကြီးစံသတ်မှတ်, သူတို့ကလမ်းကြောင်းသစ်ဒါမှမဟုတ်ဘာအေးသည်အဘယ်သို့သောလူကိုပြောပြသို့မဟုတ်မ. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာဒီရက်ဖြစ်လူကြိုက်အများဆုံးအရာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဧကန်အမှန်ဆုံးသောအရေးကွီး၏. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို swag ရှိသည်ဖို့အတှကျသူ့ရဲ့စုံလင်သော, အကောင်းဆုံးကို swag, နှင့်ရိုးရှင်းစွာသောထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်အရာ၌ဝါကြွားဖို့ဆိုလိုတာကတစ်ဦးဘုရားရေးရာ Swagg Hacking ကို. ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းလျှောက်အတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတအားဖြင့်သာဝါကြွားခြင်းနှင့်ဝါကွှားသခင်ယေရှုခရစ်အပေါ်လက်ဝါးကားတိုင်အားဖြင့်သာသူ၏ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်လာကြပြီကြောင့်ကျေးဇူးတရား၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောခြင်းမှတဆင့်ကပိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုအနိုင်ရငါတို့အသက်ရဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်.
Malemaadutse • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:24 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
စာရာသည် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:38 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
လုံးဝသငျနှငျ့အတူသဘောတူ! ငါဖြစ်လျက်ရှိ၏ထင်ဘယ်တော့မှမ “ကြွားဖို့ built” သို့သော်သင်ကျိန်းသေငါ့ကိုယုံကြည်. ကျွန်မအလွန်သင့်ရဲ့အရေးအသားကိုဖတ်ရှုခံစားပျော်မွေ့. မယုံနိုင်လောက်အောင်စားစရာထင်ပေမယ့်အားပေးမှုနှင့်အတူဟန်ချက်ညီ. နှစ်ခု၏ပြီးပြည့်စုံသောအရောအနှော!! အရေးအသားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဂျေး • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:08 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အာမင်. ဒါဟာအချက် Tripp အပေါ်ခဲ့သည်. ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. #SpiritLed #BragOnMyLord
KARLONBURKETT • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
KARLONBURKETT • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:32 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
“ကျနော်တို့အရွယ်ရောက်လူတို့သညျကွားလြှငျငြီးငွေ့သူတို့၏အထက်တန်းကျောင်းဘောလုံးရက်ပတ်လုံးအကြောင်းကိုဝါကွှားရ (လှုပ်ရှားဖို့အချိန်တန်ပြီ, ခင်ဗျား).” #Preeeach!
KGRANT • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤဆောင်းပါးနှင့်ယောက်ျားလေးတို့အပေါ်မှာလဲ, ငါအားပေးခံစားမိကြဘူး. ဤစကားများအားထံမှဆင်ခြင်ဖို့ဤမျှလောက်. ဒါဟာတစ်ဦးအားပေးမှုနဲ့မိမိကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ဦးစလုံးရဲ့. ဘုန်းအသရေငျသညျဤရေးသားဖို့ဆုကြေးဇူးကိုပေးကမ်းခြင်းအဘို့အကိုဘုရားသခင်အားဖြစ်!!!
Terrence • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 11:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ်ယောဘသည်ခရီးစဉ်! အသံအပိုင်းအစ Love. ရှေ့မှာမြင်ကြဘယ်တော့မှမ! ဒါဟာငါနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားအချိန်ငါ့ကိုသတိပေး… နောက်တာပါ! ဂရိတ်၏နှိုးဆော်.
Langston • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 1:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကို post ကို, ခရီးစဉ်ကို! ဒါကိုကြိုက်တယ်. အလွန်ယခုအားပေးတိုက်တွန်း. နာခံခြင်းနှင့်သင်၌ဘုရားသခင်မှတဆင့်စကားပြောဆိုခွင့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
အိန္ဒိယ • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 1:35 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှယ်ယာမစ္စတာ. ခရီးစဉ်ကို!!! ဒါကြောင့်အင်အားကြီးမားနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေတဲ့!
ဂျိမ်း • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 4:34 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကြည့်ဖို့ဒါကြောင့်အကြီးအသေးဂီတထက်အလတ်စားကွဲပြားခြားနားသောင်ပင်လျှင်သမ္မာတရားကိုဟောပြောသ. ဒါကအကြီးအဖတ်ခဲ့ပါတယ်, ငါကပိုကြားနာရန်မျှော်လင့်. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ, ခရီးစဉ်ကို.
Reggie • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 8:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Aubrey • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 10:35 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဆိုပါတရားဒေသနာ၏ရိုးရှင်း Love – လှသောအဆင်း
Mallory • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 10:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျယခု မှစ. အရာရာပြန်ပြောကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်သလား?
broChris • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 10:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ်အတွေးမျက်မစ္စတာဖတ်ပါ. ခရီးစဉ်ကို. အတော်များများကနှလုံးဤယူနိုင်ပါသည်, ယခုအလေ့အကျင့်သို့. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျပေးထားတဲ့လက်ဆောင်တွေကို အသုံးပြု. သိမ်းဆည်းထားပါ, ယခုတစ်တော်တော်ကြီးမြတ်စာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်, အဲဒီလက်ဆောင်တွေနဲ့အတူသတင်းစကားကိုဝေမျှဖို့ဆက်လက်… သင်အစဉ်အဆက်ကိုသိပါလိမ့်မယ်ထက်ပိုမိုရောက်ရှိနေသည်. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ, #JesusIsKing
ဟိုဆေး • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 10:44 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Billy • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 10:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ်ဆောင်းပါး. ဤသူသည်ငါမပြုမီစဉ်းစားဘူးသောအချို့သောနက်ရှိုင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေး. ကျွန်မအပိုင်းနှစ်ဦးမှမျှော်လင့်တယ်! အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုကြ.
PhillipHolyApostleMurphy • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 12:24 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အလွန်ကောင်းသောသတင်းစကား… မှတဆင့်စကားပြောငါတို့သခင်စကားကိုနားထောငျဖို့မင်္ဂလာရှိ၏… ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျသည်ကြီး!!!! ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျသည်ကောင်း!!!! သူကဒါကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်!!!
Rex okaro • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 12:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Dri • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 2:53 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Mareesa • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 2:58 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
IsaacD • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 3:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤအရာသည်အလွန်ဆောင်းပါးခဲ့သည်, အလွန်ကောင်းစွာတိကျမ်းစာ၌လာသည်, ငါတကယ်သင်ကဆက်ပြောသည်အသံအစိတ်အပိုင်းကိုခစျြ. ဒီမျှဝေဘို့သင့်ကိုဆရာကျေးဇူးတင်ပါသည်.
ပယင်း • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 7:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မမကြာခဏဤသို့ပြု; ကြွားဝါ. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော့ပျောင်းနှလုံးသားများ၏ထိပ်ပေါ်မှာကျနော်တို့စောင့်ရှောက်၏မာနကိုပိုရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖွင့်. ဘုရားသခင့ပေးခြင်းတချို့အကြောင်းပြချက် Non-ယုံကြည်သူများများ၏ရှေ့မှောက်၌ဘုန်းအသရေခဲယဉ်းပေမယ်သာဖြစ်သောကြောင့်မာနထောင်လွှားနိုင်ပါတယ်.
မကြာသေးမီကငါ re-ယူသောအခါ ASVAB အလွန်မြင့်မားသွင်းယူ. ငါသည်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုထိုသို့ပြုကကူညီပေးခဲ့ဖူးသိလို့ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့. မိမိအမျက်နှာသာဂိုးသွင်းငါ့ကိုပေးခဲ့တယ်အဘယ်အရာကိုကြီးသူကငါ့ကိုထားအသိပညာအမှန်တကယ်အရင်ကနားမလည်နိုင်ဘယ်တော့မှသင်္ချာညီမျှခြင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်. ငါနောက်ကျောကိုငါ့ယူနစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာရသေးကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူလေအဘယ်အရာကိုလူတိုင်းကိုပြောသည်ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာငါကအားလုံးကိုဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည်ငါသိတယ်ရှိသူများသာပြောသည်ချင်ပါတယ်သိလို့ပြစ်မှုထင်ရှားခံစားခဲ့ရ. အဆိုပါမယုံကြည်သောသူတို့ငါသည်ငါ့သက်သေခံချက်ကိုပြောသည်ဘယ်တော့မှ.
ငါတနင်္ဂနွေရက်တွင်ထောင်ဒဏ်ဝန်ကြီးဌာနကပြုသူတို့ကိုငါများ၏ရှေ့မှောက်၌င့်သောအခါငါလျော့နည်းဂရုမစိုက်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်မခဲအစဉ်အဆက်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဆောင်ခဲ့အလုပ်မှာပေါ့သောအခါငါထို့နောက်ဇှတျထိုးသမားပေါ့စဉ်းစားလျှင်လိုက်တယ်င်. လူတိုင်းကိုယ့်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးပေါ့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှထိုသားသည်ငါ့စိတ်ထဲပေါ်င်သောသူအပေါင်းတို့ရဲ့ပုံကိုမဆိုသဲလွန်စရှိတယ် 24/7.
simbahun • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 9:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဦးမယ့်ငါ့အသက်ကိုခရီးစဉ်ပြောင်းလဲသွား. ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်လပါဝါကြိမ်မြောက် vison ခံယူဆုတောင်းပဌနာ…. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Alejandro • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 9:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို , ဘုရားသခငျသညျသငျသညျလူကိုကောင်းကြီးပေး !
ဤသည်သင်တို့ကိုငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်သတိပေးနှင့်များအတွက်အဖြစ်လိုအပ်ခဲ့သည်, ဘုရားသခင့ဝန်ကြီးဖို့သင်အသုံးပြုခွင့်ပြု. ကျနော်တို့လည်ပင်းကိုဆန်အကြောင်းကိုဝါကွှားဖို့အကောင်းဆုံးအရာရှိ.
Tiffany • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 9:42 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်! ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခရီးစဉ်. ငါသည်သင်တို့၏နေဆဲအချိန်တိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်အသိပညာကျဆင်းနေပုံကိုကိုချစ် :)
BrantPhelps • သြဂုတ်လ 21, 2013 တွင် 10:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယင်, ခရီးစဉ်ကို… ငါတို့သည်အရာခပ်သိမ်းအကြောင်းကိုဝါကြွားထိုက်သူတစ်ဦးထူးချွန်နှင့် Awesome ကိုဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးပြီးမှခဲ့သည်!
ဣဇာက်သည် • သြဂုတ်လ 22, 2013 တွင် 10:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့အချင်းချင်း-related လမ်းကိုမှာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့အဟောင်းနှင့်အသစ် testatment ကိုယျ့ကိုယျကိုအပေါ် braging များ၏စိုးရိမ်ရေမှတ်နားလည်နိုင်အောင်အံ့သြမိပါတယ်!! ဒီမကြာသေးမီကသင့်လမ်းကြောင်းများအတွက်လှုံ့ဆော်မှု Is “အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျအပေါ် Brangin”???
ငါက၎င်း၏ဒီတော့သက်ဆိုင်ရာ coz သင့်ရဲ့ဂီတကိုချစ်!! ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ!! ကောင်းမွန်သောအလုပ်တက်အောင်ထားပါ!!
ဂျေး • သြဂုတ်လ 22, 2013 တွင် 8:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မအကြောင်းသင့်ယောက်ျားတွေပြောသည်အိုးအိမ်မဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာကိုသတိရပါ? သူတို့ကအကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။. မဆိုအကူအညီတောင်းကြီးမြတ်ယောက်ျားတွေပါလိမ့်မယ်. ဘုရားသခငျသညျပေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ပင်သညျယရှေုသစ္စာမရှိသောရှိခဲ့သည်ရှိရာအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဘူး. LA ကအတွက်လူတိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မယုံမရှိခြင်း၎င်းတို့၏ကျောလှည့်နေသည်. နိုငျငံတျောသညျကိုထောကျပံ့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှပေးပေးနိုင်ပါတယ်. သူတို့ကအစဂီတနှင့်ဝိညာဉ်တော်သည်အမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့သီချင်းစာသားထဲမှာပြောတတ်ကြဘူး. အဖြစ်ကောင်းစွာပျံ့နှံ့ကြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်! ကျနော်တို့နိုင်ငံတော်သို့ y'all အဘို့ဤအမှုကို. အီးမေးလ်ပို့ရန် livin4christ4lyfe@gmail.com .. ညီအစ်ကိုတို့အားကူညီပေးနိုင်ပါတယ်. အားလုံးကိုချစ်တယ်.
ဂျက်စီကာ • သြဂုတ်လ 26, 2013 တွင် 9:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကိုဘလော့ဒီဘလော့ကနေတဆင့်ငါ့ကို rebuking အဘို့အသငျသညျသခငျဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ကိုယ်ငါ၏သခင် Hallelujaah အပေါ် braggin စတင်ရန်လိုအပ်! :-)
ကိုက် • သြဂုတ်လ 28, 2013 တွင် 12:39 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဖေါ်ပြ: ခရီးစဉ် Lee က • ဝါကွှား Pt ရန် built. 2
ဖေါ်ပြ: ခရီးစဉ် Lee က • ကြွား Wallpaper
တာရိန်း • ဧပြီလ 9, 2014 တွင် 2:11 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အစွမ်းထက်! သငျသညျရိုးရှင်း၌ဤဖြိုဖျက်. လူငယ်တစ်ဦးသည်လူအဘို့ဤမျှလောက်ပညာတရားကို. ကျွန်မနှင့်အတူဆုတောငျးလနှင့်သင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်တယ်. သင့်ရဲ့လက်ဆောင်တွေသင်တို့အဘို့အခန်းထဲမှာစေမည်. ဘုရားသခင့လုပ်ဖို့သင်တို့ကိုခေါ်တော်သောအရာကိုသာလျှင်ပြုပါ, သငျသညျရေနံများ, ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်. သငျသညျမှငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သာယာဝပြော (Shilom)!